Birgunj Daily - खेलकुद
वीरगंज २६ पुस । गिरिजा प्रसाद कोईराला फाउण्डेशन पर्साले जी पी प्रथम प्रदेश स्तरिय गोल्ड कपको समितिहरुको चयन गरेको छ । आज बसेको बैठकले माघ १८ गते देखि प्रदेश स्तरिय हुने गोल्ड कपका लागि गिरिजा प्रसाद कोईराला फाउण्डेशनले आज खेलकुद समिति तथा उप समितिहरुको गठन गरेको हो । जिपी फाउण्डेशन पर्साका सभापति मोहम्मद शहाबुद्दिनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जी पी प्रथम गोल्ड कपका विभिन्न उप समितिहरुको गठन भएको फाउण्डेशनका सदस्य धिरज कुमार गुप्ताले जनाएका छन ।
काठमाडौँ, २७ मंसिर । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका पदक विजेता खेलाडीलाई शुक्रबार नगर परिक्रममा गराइएको छ । पानी परेपछि निर्धारित समयभन्दा करिव साढे १ घण्टापछि मात्रै नगर परिक्रमा सुरु गरिएको थियो । त्रिपुरेश्वरबाट सुरु गरेर न्युरोड, इन्द्रचोक, मखन, भोटाहिटी, रत्नपार्क, भृकुटीमण्डप, भद्रकाली, सिंहदरबार, थापाथली, पुल्चोक, जावलाखेल, लगनखेल, सातदोबाटो, कोटेश्वर, जडिबुटी, नयाँ थिमी, राधे–राधे, सल्लाघारी, सूर्यविनायक चोकको परिक्रमा गर्दै पुनः त्यही बाटोबाट कोटेश्वर, तीनकुने, नयाँ बानेश्वर, थापाथली हुँदै परिषद हातामा टुंगिने राखेपले जनाएको छ ।
काठमाडौं,१८ मंसिर ।काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा जारी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपालले अहिलेसम्म २५ स्वर्ण पदक जितेको छ । हिजो २३ स्वर्ण जितेको नेपालले आज विहान भएको खेलमा २ स्वर्ण थप गरेको छ । कराते खेलाडी अनुपमाले मगर १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक जितेकी छन् ।
बारा २ असोज “प्रथम रामबन टाँडी गोल्डकप २०७६” को पहिलो खेल निजगढ नगरपालिका ११ ले जीतेको छ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ को रामबन टाँडी रङ्गशालामा बिहिवारबाट शुरु भएको पहिलो खेलमा आयोजक टिम आर.टि. युथ क्लबलाई पराजीत गर्दै निजगढ नगरपालिका ११ले जीत निकालेको हो । संविधान दिवसको अवसरमा आयोजीत यस प्रतियोगीताको पहिलो खेलमा आयोजकलाई निजगढ ११ ले १–० ले पराजीत गरेको हो । निजगढका लागि खेलको ८ औ मिनेटमा समन कुवरले गरेको गोल नै पहिलो दिनको खेलमा निर्णायाक बनेको थियो ।
कृष्णा यादव बीरगंज ३१ जेष्ठ नेपाली काग्रेसका युवा नेता रामरुप कुर्मी द्धारा गढीमाई मेलामा आज देखी शुरु भएको कुस्तीको उदघाटन गर्नु भएको छ । नेपाली काग्रेसका माहासमिती सदस्य समेत रहनु भएका नेता कुर्मीले बीरगंज माहानगरपालिका १७ स्थित अलौंमा रहेको गढीमाई मेलाले आयोजना गरेको कुस्ती खेलको एक कार्यक्रम बिच उदघाटन गर्नु भएको हो ।
काठमाडौं,२३ जेठ । विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफ लाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आज भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा पुलिसले एपिएफलाई पाँच विकेटले पराजित गर्दै फाइलनमा पुगेको हो । यही जेठ २५ गते हुने फाइनल खेलमा पुलिसले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबसंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा आर्मीले प्रदेश नं। ३ लाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको थियो ।
काठमाडौं, १० फागुन । यहाँ सम्पन्न चौथौ शहिद स्मृति कप खुला नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि देशभक्त युवा क्लब नवलपरासीले हात पारेको छ ।
काठमाडौँ, ९ फागुन । आइसीसी महिला विश्वकप टि ट्वण्टी क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत एशिया छनोटको दोस्रो खेलमा नेपाल थाइल्याण्डसँग पराजित भएको छ ।
सीमरा गोल्डकपको उपाधी थ्रिस्टार क्लबले हात पारेको छ .
बारा १२ माघ । सिमरामा जारी दशौँ सिमरा गोल्डकपको उपाधी जित्दै रुस्लान थ्रिस्टार क्लबले हात पारेको छ ।
हिमालयन शेर्पा दोस्रो विशाल समृति फुटबल प्रतियोगिताको फाईनलमा प्रवेश
कृष्णा यादव वीरगञ्ज, २ माघ हिमालयन शेर्पा दोस्रो विशाल समृति फुटबल प्रतियोगिताको फाईनलमा प्रवेश गरेको छ ।
दोस्रो विशाल समृति फुटबल प्रतियोगिताको सोमवार भएको खेलमा आर्मी विजयी
कृष्णा यादव बीरगंज ३० पुष । वीरगञ्जको नारायणी रंगशालामा जारी प्रतियोगितामा तेस्रो दिन भएको खेलमा आर्मीले बारा सिमराको नव जनजागृति युवा क्लबलाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गरेको छ ।
काठमाडौं, ३० असार । रुसमा जारी विश्वकप फुटल अन्तर्गत आज ९शनिबार० तेस्रो स्थानका लागि बेल्जियम र इंग्ल्याण्ड खेल्ने भएका छन् ।
पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको क्रोएसियाले विश्वकप जित्ने आधार
काठमाडौं ३० असार, २०१८ फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आइतबार सन् १९९८ को च्याम्पियन फ्रान्स र पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको क्रोएसियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
अतिरिक्त समयमा दुई गोल गर्दै कोष्टारिका माथि ब्राजिलको विजय
असार ९ । विश्वकपको उपाधी दाबेदार मानिदै आएको ब्राजिलले शुक्रबार भएको खेलमा कडा प्रतिस्पर्धाबीच कोस्टारिकामाथि २–१ गोलको जित हासिल गरेको छ ।
असार ७, । विश्वकप फुटबलमा स्पेनले इरानलाई १ शून्यले हराएको छ । बुधबार राती रुसको काजान एरिनामा भएको खेलमा स्पेनलाई जिताउन खेलको ५४ औ मिनेटमा डिएगो कोष्टाले गोल गरे ।
वीरगंजको आदर्शनगरमा आईएनपिएल क्रिकेट टुर्नामेन्ट सुरु
बीरगंज २८ कात्तिक, युवा जनशक्ति समाज नेपाल वीरगंज–३ को आयोजनामा आज देखि वीरगंजमा नेपाल भारत महिला तथा पुरुष क्ष्ल्एी क्रिकेट टुर्नामेन्ट सुरु भएको छ ।
इंग्ल्याण्ड र जर्मनी शुक्रबार भिड्दै,ह्यारी केन र ह्यारी विन्क्स टिममा परेनन्
काठमाण्डौं , २१ काक्तिक । टोटनह्यामका ह्यारी केन र ह्यारी विन्क्सलाई जर्मनी र ब्राजिलसँगको मैत्रिपूर्ण खेलका लागि इंग्ल्याण्डको टिममा राखिएको छैन ।